Post by Admin, Nov 18, 2019.
Shabeel Telesom Cup 2019
Tartanka kubadda Cagta ee Telesom Group ayaa si rasmiya uga furmay Magaaladda Hargeisa, Gaar ahaan garoonka Future.
Tartanka Telesom Group ee sannadlaha ah ee ay isugu yimadaan shirkadaha ku bahoobay Telesom Group ayaa maraya sannadkiisii saddexaad oo xidhiidha. Hadaba tartankan ayaa ka duwan tartanadii hore sababtoo ah ugu horrayn waxa laga badalay magacii Telesom Cup oo waxa loo bixiyay Shabeel Cup sababtoo ah walaalkeen Cabdirisaaq Cabdilaahi Shabeel oo lahaa fikirka koobkan, isla markaana ka mid ahaa shaqaalaha shirkadda Telesom oo haatan xaalad caafimaad ugu maqan dalka Hindiya ayaa loogu magac daray.
Telesom Shabeel Cup ayaa socday muddo 26 Cisho ah, wuxuuna ka qabsoomay garoonka Future, waxaana kasoo qayb galay 8 kooxood oo hoos yimaada Telesom Group.
Tartankan oo u jeedadiisu ahayd Kobcinta iyo Isdhex-galka Shaqaalaha Shirkaddaha Telesom Group. Kooxaha tartamayay ayaa ku ciyaarayay magaca Telesom Group, waxayna kala ahaayeen Telesom, Darasalam Bank, Zaad service, TEC (Telesom Electric Company), Somgas, Xawaaladda Taaj, Kaabsan iyo MAT (Modern Automative Technology).
Kooxahaas ayaa loo kala qaybiyey laba qaybood oo kala ah:
Xafiiska xidhiidhka dadweynaha ee shirkadda Telesom ayaa soo qabanqaabisay iskuna duba-riday koobkan.
Labadii group ee A iyo B waxa kasoo baxay afarta kooxood ee kala ah:
Darasalam bank, Telesom, Kaabsan iyo Zaad. Ciyaartii kama dambaysta ahayda waxa wada ciyaaray kooxaha Kaabsan iyo Darasalam bank. Ciyaartaas oo la ciyaaray Shalay oo bishu ahayd 8 November ayaa labada kooxoodba soo bandhigeen ciyaar aad u raali gelisay daawadyaashii kasoo qayb galay.
Guntii iyo gebogebodiina waxay 3:2 guushu ku raacday kooxda Darasalam Bank oo markii labaad oo xidhiidha ku guulaysatay koobkan.
Waxa madhashaas ka biladihii iyo koobabkiiba bixiyay Yasiin Nuur Mooge ah madaxa xafiiska xidhiidhka dadweynaha ee Shirkadda Telesom.
Jaa’isadihii iyo koobabkii la bixiyay waxa ku kala guulaystay:
Kooxdii ugu akhlaaqda fiicnayd: TEC (Telesom Electric Company)
Goolashii ugu badnaa: Guuleed Gacalle (Kooxda Zaad)
Laacibkii Tartanka:Amiin Cabdi Guuleed (Kooxda Kaabsan)
Kooxdii kaalinta labaad gashay: Kaabsan
Kooxdii Koobka ku guulaysatay: Darasalam Bank
Koobkan ayaa kusoo dhamaaday jawi degan oo farxadeed waana guul usoo hoyatay Telesom Group.